14 Qiyaas oo diirada lagu saarayo Ololaha Suuqgeynta Dijital ah | Martech Zone
14 Mitirro loogu talagalay inay diiradda ku saaraan ololeyaasha suuqgeynta dijitaalka ah
Sabtida, Juun 21, 2014 Axad, Juun 22, 2014 Douglas Karr
Markii ugu horreysay ee aan dib u eegay xogtaan, waxaan yara yara shakiyay inay jiraan qiyaaso badan oo la waayey… laakiin qoraaga ayaa caddeeyay inay diiradda saarayeen ololayaasha suuq-geynta dijitaalka ah mana ahan istiraatiijiyad guud. Waxaa jira cabirro kale oo aan indha indheyn ku sameyno guud ahaan, sida tirada keywords keywords iyo celceliska darajada, saamiyada bulshada iyo saamiga codka… laakiin ololeha sida caadiga ah wuxuu leeyahay bilow bilow ah oo joojiya sidaa darteed maahan in cabir kastaa lagu dabakho olole qeexan.
Tani infographic ka Digital Suuq Filibiin liis gareynaya halbeegyada muhiimka ah in diirada la saaro marka dib loo eegayo a ololaha suuq-geynta dijitaalka ah.
Guud ahaan taraafikada goobta, ilaha taraafikada, taraafikada mobilada, sicirka-guji (CTR), kharashka-gubid kasta (CPC), cabbiraadaha is-beddelka, sicirka beddelka (CVR), qiimaha halkii hogaamiye (CPL), heerka soo-kabashada, celceliska aragtida bogga halkii booqashada, celceliska kharashka boggiiba, celceliska waqtiga goobta, heerka soo-booqdayaasha soo noqonaya, soo-celinta maalgashiga (ROI), iyo qiimaha soo iibsiga macaamiisha (CAC) dhammaantood waxay ku qoran yihiin kuwa ugu muhiimsan.
Tags: celcelis ahaan qiimaha boggiibacelcelis ahaan aragtida bogga booqashokiibacelceliska waqtiga goobtaheerka cigtacacheerka-riixcabirrada beddeliddaheerka beddelkaqiimaha riixakharashka halkii horseedkharash si aad u hesho macaamilcpccplctrqiimaha helitaanka macaamiishacvrsocodka gaadiidkaGuud ahaan taraafikada goobtaheerka booqdayaasha soo noqonayasoo noqoshada maalgashiga (ROI)ilaha taraafikada
Xaaladda Hadda ee Suuqgeynta Macluumaadka 2014